Ukuprinta intloko yokucoca nge-gamma-butyrolactone
ikhayaPortfolioPrinta Intloko ukucoca nge-GBL
Amanyathelo okucoca ngesandla iNtloko yePrinta
Inyathelo 1-Susa iitinki kunye nentloko yeprinta. Susa iitanki zentsimbi kwintloko eprintiweyo (ephethe itanki) kwaye uzitywinele kwilokhi ye-zip okanye kwenye ibhegi yeplastiki engatywinwayo. Zibekele ecaleni, zikhetheke ngokuthe tye.
Emva koko susa intloko yomshicileli (iyaphuma). QAPHELA: Unokufuna ukunxiba iigloves zelex ukuze uncede ugcine i-inki ezandleni zakho.
Inyathelo 2-Thatha intloko yomshicileli. Kukho iingcebiso ezininzi ngeendlela zokucoca intloko yomshicileli kwaye zonke zinomahluko koku kulandelayo:
Fumana ipani elincinci, elingaxinwanga kwaye ubeke ungqimba okanye ezimbini zeetawuli zephepha ezantsi kwesikhongozeli ukukhusela isiprinta sentloko kumonakaliso wonxibelelwano.
Fudumeza phezulu (nge-microwave) amanzi acocekileyo / afakwe ibhotile ukugubungela iitawuli zephepha. Unokusebenzisa umxube we-50 / 50 we-ammonia kunye namanzi afihliweyo (malunga nepint iya kwenza). Fudumeza lo mxube kwi microwave kangangemzuzu okanye okoko-akufuneki BUYA ukubila.
Kancinci galela amanzi okanye umxube kancinci kwiitawuli zephepha ukuze ube ne-1 / 2 ye-intshi yolwelo emazantsi epani.
Misela intloko yomshicileli kwisitya ngaphezulu kweetawuli. Kuya kufuneka ubone i-inki 'ukopha' ngaphandle. Hambisa intloko yokuprinta kwindawo eyahlukeneyo (malunga nomzuzu kwindawo nganye) kwaye unikine kakuhle. Oku kuya kunyibilikisa iicinki zeinki.
Ukuba intloko yomshicileli ifihlwe kakuhle mayiyeke ukuba i-3 ukuya kwiiyure ze-4 okanye ubusuku bonke. Ungayihambisa kancinci kwindawo eyahlukileyo rhoqo ngeyure okanye njalo
Inyathelo 3-Gxotha intloko yomshicileli ngamanzi.
Bamba iyunithi phantsi kwetephu yokuhambisa amanzi ashushu ngokuthambileyo. Beka umnwe wakho ngaphezulu kwempompo ukwenza uxinzelelo lwasemva lokukuvumela ukuba ujikeleze amanzi kuwo onke amatyala entloko yeprinta. Kuya kufuneka ubone ukuba akukho gunk yakha yaphuma. Yenza oku kude kube kuphele amanzi.
Inyathelo 4-Yomisa intloko yomshicileli uze ungene endaweni yoko.
Susa iyunithi kwaye uyihlambe ngokucokisekileyo kunye namanzi acocekileyo. Yibhangise yome kwaye uyisongele ngeethawula ephepheni ukuze yomile ngokomoya. (Abanye abantu basebenzisa isomisi seenwele kwindawo esezantsi yokucoca intloko yomshicileli.)
Phinda wenze intloko yentloko yomshicileli kunye neetinki. Umshicileli kufuneka enze ngokuzenzekelayo "Ulungelelwaniso lwentloko yePrinta." Ukuba ayenzi, ngesandla yenza “Ukulungelelanisa intloko yoLungiso” ngesixhobo somshicileli. Emva koko jikeleza umjikelezo wokucoca intloko okanye ezimbini ezilandelwa ngokuprinta iphatheni yendawo engenamanzi ukukhangela inkqubela phambili yakho.
Phinda kwakhona njengoko kuyimfuneko.
Facebook GBL iYurophu